“WASIIRRADA WAKHTIGOODU DHAMMADAY WAA IN LALA XISAABTAMO OO HANTIDII UMADDA LA WAYDIIYO EE UMA BAAHNIN IN AY SOO NOQDAAN” SIYAASI CABDIQAADIR CALI OBSIIYE | Saxil News Network
“WASIIRRADA WAKHTIGOODU DHAMMADAY WAA IN LALA XISAABTAMO OO HANTIDII UMADDA LA WAYDIIYO EE UMA BAAHNIN IN AY SOO NOQDAAN” SIYAASI CABDIQAADIR CALI OBSIIYE
Hargeysa:-(saxilnews.com) Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland ee inta badan ka hadla xaaladda dalka iyo duruufaha nololeed ee shacabka loona yaqaanno Madaxweynaha Mustaqbalka ayaa dardaaran iyo duco u diray Madaxweynaha cusub ee la doortay isaga oo dhinaca kalena shacabka kula dardaarmay in ay Madaxweynaha u duceeyaan oo fursad siiyaan isaga iyo xukuumadda uu soo dhisi doono halka uu Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye dhawr dardaaran Madaxweynaha ugu diray kuwaasi oo ku aaddan qaabka uu hawsha u bilaabi doono isaga oo Madaxweyne Muuse Kula dardaarmay in aanu haba yaraatee hal qof ka soo celin xukuumadda wakhtigeedu dhammaaday ee KULMIYE oo uu ku sheegay kuwo u baahan in lala xisaabtamo ee aan u baahnayn in xilal dambe loo cimaamado. Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye oo Shalay khadka Taleefanka ugu warramay wargeyska Foore waxa uu Madaxweynaha La Doortay Mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay oo dhawr qodob uga iftiimiyey barnaamij siyaasadeedkiisa uu ka siyaasi ahaan isagu hore ugu diyaarsaday in uu dalka ku hogaamiyo haddiiba uu Ilaahay ku guuleeyo halganka uu ugu jiro xilka Madaxnimo ee dalka isaga oo muddo badan dadaal ugu jiray sidii dalkani u yeelan lahaa Murashax Madaxweyne oo madax bannaan oo xisbiyada Somaliland ka madax bannaan waxaanu isaga oo arrimahaasi ka hadlaya Siyaasi Obsiiye yidhi: “Ugu horrayn waxaan halkan Ilaahay uma mahad celinaynaa Ilaaheena weyn SWT ee innaga soo saaray xaaladdii adkayd ee dalkeenu galay oo ahayd marxalad adag oo aynu dib ugu noqon gaadhnay maraaxilkii dalkani hore u soo maray ee adkaa, Ilaaha arrinkii doorashada wanaag innoogu dhameeyey ayaa mahad leh. Umaddu waa in ay Ilaahay SWT u noqdaan oo u mahad naqaan wanaagga iyo amniga uu innagu galladay ee innoo adkeeyey. Waa in aan toobbad keennaa oo isa saamaxnaa oo aynu ka shaqaynaa danta dalka. Isku-duubnaan ayaan idiin dardaarmayaa iyo in aan ilaashano nabad-gelyadaasi. Mahadnaqu waa waxyaabaha ku xasiliya waxa aad haysato”.
Intaa kadib Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) waxa uu dardaaran iyo tilmaamo hoge-tusaalayn ah u diray Madaxweynaha La Doortay dhawaan Mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxaanu yidhi: “Madaxweynaha La Doortay waan u ducaynayaa waanan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay Madaxweyne waxaad tahay Madaxweynihii shanaad ee la doortay. Dadaallada aan hore u soo galnay waxa ay ahayd in aan helno deegaan siyaasadeed oo Murashax madax bannaani ka soo baxo oo waxa aan doonayay in aan umaddan ku hogaaminno Madaxweynihi shanaad ee dalka balse haddii adiga Ilaahay kugu simay waxa aannu ku dadaali doonaa in aannu halkaasi ka sii wadno in umaddani hesho Murashax madax bannaan oo aannu ku soo baxno Madaxweynaha lixaad ee soo socda Insha Allaahu. Waxaan kugu dardaarayaa waxa aan jeclaan lahaa in aan umaddan ku hogaamiyo oo aan u qabto ee ay u harraad qabto in umaddani lagu hogaamiyo. Barnaamijka aan doonayno in aan dalkan ku dhaqo ayaan qaybo ka mid ah kugula dardaarayaa in aan umaddaada ku hogaamiso. Barnaamijka aannu muddada soo wadnay ee aannu umadda u hayno waxa ku jirta arrimo la yidhaa 7-da Mucjiso. Qaybo ka mid ah ayaan kugula talin lahaa maadaama aanu jirin Madaxweyne hore u soo qabtay arrimahaasi. Waxa aan kugula talinayaa in aad soo dhisto xukuumad tiro yar oo tayo badan oo aan ka badnayn 10 wasiir oo aad is hoos keento wasaaradaha tirada ka badan ee is qaadan kara. Qofka aad xulanayso waxaad u eegtaa in uu aammin yahay oo umadda waxeeda maku aamini karaysaa. Ka yahay mid danta umadda ka ka horraysiinaya dantiisa gaarka ah oo tiisa dambaysiinaya. Xukuumaddii hore ee Siilaanyo waxa ku jira rag badan oo ku soo eegaya oo doonaya in ay xukuumaddaada xilal ka qabtaan. Waxaan kugula talinayaa in aad xukuumaddii KULMIYE ee hore halkaa iska dhigto oo aanad waxba kaga soo darsan. Haddii ay Wasiirro noqoto, haddii ay Ku Xigeenno Noqoto, haddii ay agaasimayaal noqoto waxaasi oo dhan halkaa iska dhig. Waayo waxa ay u baahan yihiin in la xisaabiyo oo hantidii umadda la waydiiyo halkay mariyeen. Waxa ay kuwaasi u baahan yihiin in la xisaabiyo ee uma baahna in xilal lagu celiyo. Waxa aad u doorataa in ay noqdaan dhallinyaro aqoonyahan ah oo daacad ah oo diin leh, xukuumaddani waa in ay noqoto xukuumaddii Dhallinyarada. Kuwaasi ayaa xaq u leh ee inta badan bilaa camalka ahayd. Madaxweyne, waxaad ku dadaashaa in aad umadda daacad ugu shaqayso oo aad hantidooda u ilaaliso oo aad dhaqaalaha u kobciso oo aad dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bilaash uga dhigto waa adeegyada bulshada ee nolosha lagama maarmaanka u ah. Sicir bararka iyo dhaqaale xumada maanta umadda baabi’isay waa in ay noqdaan ajandahaaga koowaad”.
Ugu dambayn Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye waxa uu dardaaran u diray shacabka reer Somaliland waxaanu yidhi: “Waar inta badan waxa aynu ka hadalnaa in laga baxo qabyaaladda iyo qoloqolada iyo waxan umadda ragaadiyey maanta. Waxa aynu ka hadalnaa Musuqa iyo dhibaatada maamul xumo. Walaalayaal waxa aynu ku naallaa mandaqad xasaasi ah oo cadawgeeduna aad u farabadan yahay. Reer Somaliland waxaan leeyahay wixii xukuumaddaa cusub ee dhalan doonta iyo ninkaa la doortay aan wakhti siinno, wakhtigiisa ha qaato oo wixii talo ah ee la siin karo ha la siiyo hana loo duceeyo in Ilaahay wanaagga waafajiyo. Ciddii xil waydaa yay cadhoonin umadda ma wada gaadhi karo xil dawladeed. Madaxweynaha waxaan leeyahay maanta xisbi ma tihid ee umadda oo dhan baad Madaxweyne u tahay. KULMIYE iyo xukuumaddiisii hore toona ma tihid ee labadaasi boggooda iska laab oo umadda u soo jeedso oo umadda caddaalad u samee, rag caddaalad waayay sida cawsha kala yaac. Caddaaladna waxaad ku samayn kartaa in aad Ilaahay iyo sharcigiisa aad u noqotid wax kale oo caddaalad lagu samayn karaa ma jiro. Caddaaladdu Kitaabka Alle ayay ku jirtaa. Sicirbararkaasi waxa aan anigu ka qaban lahaa way ii qoran tahay balse waxaan talo kugu sii siinayaa in aad in aad xoojiso bangiyada dawladda oo dadku bangiyada dawladda aaminaan oo lacagtan message-ka ah meesha laga saaro. Lacagta shilinkana qiimo loo yeelo